ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း - Myanmar Gospel Songs
V1. အကြီးမြတ်ဆုံးဘုရား သခင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာ ကျွန်ုပ်သည် ဗလာအနတ္တိပါ
အကောင်းမြတ်ဆုံး ဘုရား သခင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာ
Pre. သခင့်ရဲ့အချစ်သာ ကျွန်ုပ်အားသခင့်နားရောက်စေ
Cho. ကိုယ်တော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အရာရာတိုင်း ကိုယ်တော်အမြဲ
အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ် အသက်ရှင်
ကိုယ်တော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အရာခပ်သိမ်း
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ရှေ့မှောက် ပြပ်ဝပ်ဒူးထောက်လျက် ကိုးကွယ်
V2. ကျွန်ုပ်၏ အစွမ်းခွန်အား ကျွန်ုပ်ကိုယ်၌စီမှာ
မရှိပါ အရာရာ အနတ္တသာ
Pre. သခင့်ရဲ့မေတ္တာ အရာခပ်သိမ်းတတ်စွမ်းစေ
သခင့်ရဲ့မေတ္တာ နေလကြယ်တွေထက် တောက်ပနေ